कोकाडास - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
यस बर्ष मैले निर्णय गरेको छु कि को लागी क्रिसमस पार्टीहरू म केहि पनि "सामान्य" किन्न जाँदैछु किनभने, अन्तमा, हामी यसलाई खाँदैनौं र यो सबै बाँकी रहेको समाप्त हुन्छ।
त्यसैले म मिठाईहरूको लागि सजिलो व्यञ्जनहरू खोज्दैछु जुन जटिलताहरू छैनन् न त सामग्रीहरू फेला पार्न र, निस्सन्देह, न त तिनीहरूको विस्तारमा। त्यसैले मेरा पुस्तकहरू हेर्दै, मैले यो रेसिपी भेट्टाएँ जुन सबै सर्तहरू पूरा गर्दछ र पनि छ coco, मेरो मनपर्ने सामग्री मध्ये एक। मेरो श्रीमान्ले उनीहरूलाई धेरै मन नपर्ने हुनाले, यस पटक उहाँको हात मल्छु। 😉
यो पनि लागि आदर्श हो स्पष्ट को फाइदा लिनुहोस् जुन हामीले छोडेका छौं अन्य व्यञ्जनहरु बनाउन यी मितिहरूमा।
अंडा सेतो र नरिवलमा आधारित स्वादिष्ट कोकाडास।
3 अन्डा सेतो
ग्रेटेड नरिवलको १ g० ग्राम
सफा र सुक्खा गिलासमा हामी पुतलीलाई ब्लेडमा राख्छौं। हामी सेतो र चिनी र कार्यक्रम खन्याउन Minutes मिनेट, º०º गति 4/ १/२।
यो समय हामी पुनः कार्यक्रम समाप्त भयो Minutes मिनेट, गति 4/ १/२।
मेरिन्गुलाई ठूलो कटोरामा हाल्नुहोस् र आधा नरिवल र मकईको चम्चा थप्नुहोस्। बिस्तारै मिलाउनुहोस् र त्यसपछि बाँकी नरिवल थप्नुहोस्।
मेरिन्गु र नरिवल राम्रोसँग एकीकृत नभएसम्म हामी सावधानीपूर्वक खामको बाटोमा अघि बढ्छौं।
बेकिंग कागजले कभर गरिएको बेकिंग ट्रेमा हामीले क्रीमको अनियमित टेबलस्पूनहरू राख्यौं।
हामीले n०-60० मिनेट ओभनमा राख्यौं।
थप जानकारी - Papos de anjo -Portuguese recipe-
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: १/२ घण्टा भन्दा कम, क्रिसमसको, इस्टर रेसिपीहरू, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » पेस्ट्री » कोकाडास
मलाई तपाईंको नुस्खा साँच्चिकै मनपर्‍यो, म यसलाई छुट्टिहरूमा सुरू गर्दछु, तर मलाई आश्चर्य हुन्छ कि तपाईंले तापक्रमलाई कुन तापक्रममा राख्नुहुन्छ? शुभकामना
नमस्ते मर्सिडीज, हामी उष्ण तापक्रम ११०º पुर्‍याउँदा हामीले सेट गरेको समान तापमान राख्छौं
म यो गत वर्ष देखि पेन्डि had गरेको थियो, तर तिनीहरूले राम्रो बाहिर देख्दा, यसले मलाई अहिले हावामा जान चाहान्छ। नुस्खा को लागी धन्यवाद
नमस्ते कर्मेला, जब तपाइँ तिनीहरूलाई गर्नुहुन्छ तपाइँ जान्नुहुन्छ ...। मलाई भन…।
मम्म्म्म ... म क्रिसमसमा आफ्ना भतीजाका लागि यो गर्छु !!!
ठिक छ, यो सत्य हो कि तपाईं कोकाडास मन पराउनुहुन्छ (यसको कुनै पनि संस्करणमा !!)।
अर्को चोटि मैले तिनीहरूलाई गरे म तपाईंलाई सम्झना गर्नेछु!
हाहाहा, नरिवल, मेरो ठूलो कमजोरी, हाहाहा
कृपया कसैले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कसरी भाँडा बनाउने बनाउनेबाट भाँडा बनाउने किनकि म सीधा फेला पार्न सक्दिन, मलाई कत्ति गाह्रो लाग्छ, मलाई थाहा छ यसमा रातो मिर्च र हरियो मिर्च छ र मलाई अरू केही याद छैन, धन्यवाद
Transi लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, तपाईंलाई भन्नुहोस् कि मँ ओभनमा उनीहरूसँग अझै छ सेतो छन् तर म पर्खिन सकेन र मैले एउटा कोशिस गरें र यो मरिसक्यो, मलाई थाहा छैन कसरी धन्यवाद
नमस्ते एम। होसे, हाहाहा, म खुशी छु, मलाई पनि त्यस्तै भयो, जब म एक नुस्खाको लागि अत्यन्त उत्सुक छु म समयको अघिसम्म अनुमोदन गर्न सक्दिन, अजाजाज्जाजा। धन्यवाद…
यो थर्मोमिक्स बिना गर्न सकिन्छ? धन्यबाद
हाम्रो वेबसाईट Thermomix को साथ सबै प्रकारका रेसिपीहरू बनाउनमा माहिर छ तर यी cocadas लाई परम्परागत तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईंले कडा नभएसम्म गोरा माउन्ट गर्नुपर्नेछ र बिन्दु in मा नुस्खा जारी राख्नुहोस्।
चिकनी हरियो बीन क्रीम